White Angel Blog(1)Year Anniversary ~ White Angel
White Angel Blog(1)Year Anniversary
4:07 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 33 comments
ဒီတခါတော့...ဟော့ပေါ့ နဲ့ ဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်...
မိန်းခလေးများအတွက် အချိုရည်....နဲ့ အချိုပွဲ
လာလည်သူ မောင်နှမအားလုံးကို “အဖြူရောင်နတ်သမီး”မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...
စားလို့ဝပြီး သောက်လို့ မှောက်သွားသည် :P
အဖြူရောင်နတ်သမီး ကို အားကျလိုက်တာ.ခင်မင်သူတွေ
လူအများကြီးနှင့် တစ်နှစ်တာ ဒိုင်ယာရီကို လာကြည့်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်၊ blogs လေးနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု့တွေပြည့်ပါစေ။
အင်း သေချာကို စီစစ်ပြီး အချိန်ပေးရေးထားတာဘဲ... ကောင်းလိုက်တာ... ကိုယ့်ဆီလာလည်တဲ့သူတွေကို တန်ဖိုးထားပြီး အချိန်ပေးထားတဲ့ သဘောလေးပါ.. နှစ်သက်စရာပါဘဲ ညီမလေးရေ.. အဖြူရောင်နတ်သမီးဆိုတဲ့နံမည်နဲ့ အခုတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ ကွက်တိပါဘဲ.. လိုက်ဖက်လှပါတယ်..
ကဗျာလေးတွေလဲ စေတနာပါပါရေးဖွဲ့ထားမှန်းသိသာပါတယ်.. အားလုံးကောင်းကြတယ်.. တစ်နှစ်ပြည့်မှသည်.. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်.. အားနဲ့မာန်နဲ့ ချီတက်ပြီး စာတွေရေးနိုင်ပါစေနော်..
စာတွေဖတ်ပြီး အစားအသောက်စားမယ်လုပ်တော့ မကျေနပ်တာ သွားတော့တယ်... ခွဲခြားခွဲခြားလုပ်ထားတယ်.. မိန်းခလေးတွေအတွက် အချိုရည်နဲ့ အချိုပွဲတဲ့..
ဟွန့် မရပါဘူး... ၀ိုင်သောက်မယ်.. ဒါဘဲ... မတားနဲ့ မူးချင်မူးသွားပါစေ... ဟော့ပေါ့နဲ့ အကင်တော့ တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်..
Happpy Birthday SeaAndAngel!
ပျော်ရွှင်ပါစေ စာတွေများများ ရေးပေးနိုင်ပါစေ
ဓါတ်ပုံလေးတွေကလဲ လှ။ စားစရာလေးတွေကလဲ နတ်သြဇာသမျှ။ အဖြူရောင်လေးတွေ ကတဲ့ ည။ ဖိုးလမင်းကြီးက ၀င်းပပ။ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။
နတ်သမီးလေး ပျော်ပါစေ ထာဝရ။
ဒီအစားအစာတွေ မြင်တော့ Feel3မှာ စားခဲ့ကြတာကို အမှတ်ရမိတယ်ဗျာ ...
ကျွန်တော် ရောက်ပါတယ် အမရေ.. ပျော်ရွင်ပါစေခင်ဗျာ။
အစာပိတ်လေး တော့ ၀ိုင်ချိုချိုလေး သောက်သွားတယ်ဗျို့...
သောက်ပြီးစားပြီး ကာရာအိုကေ လေးလည်း လုပ်ပါဗျို့...။ အသံနဲ့ နှိပ်စက်ရင်း အစာကြေသွားမှ ထပ်စားရအောင်လို့။
နတ်သမီးရေ blog ရေးခြင်းတနှစ်ပြည့်ရေးထား စာတွေလာဖတ်သွားတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ လူတွေကိုယဉ်ကျေးသိမ် မွေ့အောင်ဆိုဆုံးမ၊ဗဟုသုတတွေမျှဝေပေးနေတဲ့ စာပေကိုဝါသနာပါလို့ပါ။ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဆက်လက်ပါ နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီး အားပေးကူညီပေး ပါ့မယ်နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ ညစာ ၀င်ဆွဲသွားတယ်။ ညစာမစားရသေးလို့ အဟဲ။ ၀ိုင်အတွက်တော့ တော်တော် ကျေးဇူးတင်တယ် တကယ်..။
မွေးနေ့ မဂ`်လာပါ အဖြူရောင်နတ်သမီး....
( ၃၀.၇ ) နေ့ တွေ နတ်သမီးအဖို့ ပျော်ရွှင်မှု အပြည့်နဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ လောက တည်နေသမျှ တည်နေပါစေ... ဆုတောင်းပေးပါတယ် ...
ရောက်လာတာ နဲနဲ နောက်ကျသွားတယ်ကွယ်။ လာရတဲ့ ခရီးကလဲ ဝေးသကိုးကွဲ့........
စားပြီးသောက်ပြီး ကျုပ်တို့ အညာကပွဲတွေလို ကွမ်းဝါးချင်လို့ ကွမ်းအစ်လေး လိုက်ရှာနေတယ် နတ်သမီးလေးရေ.....
၀ိုင်လေးက နည်းနည်းပျော့တယ်ဗျို့.. ကိုမြစ်ကြီးပြောသလို ကာရာအိုကေ ပါဆိုရင်တော့ ချယ်ပဲ.. အားလုံး ဆွဲသွားတယ်ဗျာ..
နောက်ကျသွားလို့ လား မသိဘူး . . .
ဘာမှတောင်မရှိတော့ ပါလားနော် . . :P
အစားအသောက်တွေ အကုန်ကြိုက်တယ် ညီမလေး... ဝိုင်က မိန်းခလေးလဲ သောက်လို့ရတယ်ဟုတ်... ရေခဲမုန့်တွေ မစား အချိုရည်တွေမသောက်ဘူးလေ... ရမလား?
wowww... ဟော့ပေါ့လေးက လှလဲလှ မိုက်လဲမိုက်... ပင်လယ်စားကလဲ ခြင့်အကြိုက်... ဂွတ်ထ....
happy one year blogging.... ညီမလေးရေ....
Long Blogging Lifeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!
စားချင်စရာတွေ ကြီးပါလားနော် နတ်သမီး ရေ နှိုတ်စက်တယ်နော်
ခေါင်းတွေအုံခဲနေတာနဲ့ ဟော့ပေါ့ အစပ်ကို ရှုးရှဲနဲ့ အဝတီးသွားတာ ပွင့်သွားတာပဲ....
ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ အချိုရေတွေ ပြန်တီးရင် ဖျားမှာစိုးလို့ သူ့အပေါ်က ဝိုင်လေး ၂ ခွက်လောက်ပဲ တွယ်လိုက်တယ်နော်... ကျေးဇူးပါ နတ်သမီးရေ...နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ဒီလိုမျိုးပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အဝကျွေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်
လှိုင်းကို Upgrade လုပ်နေလို့ မနေ့က လိုင်းက မရ။
( ကိုယ့်နေရာက ပို့စ်တွေတောင်မှ ကြိုတင်ထားတာတွေ )
ဒါကြောင့် အခုမှ အပြေးအလွှားလာတာ. . အဟီး
အပေါ်က လူတွေက အနံ့ပဲ ရှူသွားလေတော့ အားလုံးကို မောင်ပိုင်စီးမကွ။ အတုန်ကို ချားပစ်မယ်။
ပလပ်. . ပလပ်. . . .ကောင်းလိုက်တာ. .
မြင်သမျှ တွေ့သမျှ အားလုံး သဘောကျ။
အွန်စောတော့နောက်ကျသွားပြီ။ မုန့်တွေ မကျန်တော့ဘူး။ မုန့်မစားရလို့ ဓါတ်ပုံတွေပဲ "မ" ပြေးပြီဗျို့။ အလုပ်များနေလို့ နတ်သမီး ပွဲလေးလွတ်သွားတာ နှမျောတယ် ရှင်။
မှတ်မှတ်ရရပါ...ဘလော့ တစ်နှစ်မွေးနေ့မှာမှ ရောက်ခဲ့ပါတယ် ...
နောက်ကျမှ ရောက်လာတာ ခွင့်လွှတ်ပါ...။ ကလေးတွေလို...ပကျွတ်..ပကျွတ်လုပ်ပြီး စားသွားပါတယ်။ :D